တရုတ်နိုင်ငံက ငလျင်ဒဏ်သင့် ယူနန် နှင့် ချင်းဟိုင်းပြည်နယ်များသို့ အရေးပေါ်ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံက မေ ၂၁ ရက် နှင့် ၂၂ ရက်များတွင် ငလျင်ဆက်တိုက်လှုပ်ရှားမှုဒဏ်ခံစားခဲ့ရသည့် ယူနန်ပြည်နယ် နှင့် ချင်းဟိုင်ပြည်နယ်(Qinghai ) များသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကယ်ဆယ်ရေးအတွက် ဗဟိုအစိုးရရန်ပုံငွေမှ တရုတ်ယွမ် ၁၀ သန်း (အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁.၅၆ သန်း) ထောက်ပံ့ ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။တရုတ်နိုင်ငံ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန နှင့် အရေးပေါ်စီမံခန့်ခွဲမှုဝန်ကြီးဌာန တို့မှ ပေးအပ်သော အရေးပေါ်ရန်ပုံငွေများကို ငလျင်ဘေးဒဏ်သင့်ဒေသများတွင် နေထိုင်ကြသည့် ပြည်သူများ၏ စားဝတ်နေရေးအဆင်ပြေစေရန် နှင့် သဘာဝဘေးဒဏ်ကယ်ဆယ်ရေးအတွက် ထောက်ပံ့ရန် အသုံးပြုသွားမည်ဖြစ်သည်။
တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်တောင်ပိုင်း ယူနန်ပြည်နယ် Yangbi Yi ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရမြို့နယ်၌ မေ ၂၂ ရက်က ငလျင်လှုပ်ခတ်ပြီးနောက် အခင်းဖြစ်နေရာသို့ ရဲအရာရှိများ
အာဏာပိုင်းများက ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ယာယီအမိုးအကာတဲ အလုံး ၅,၀၀၀ ၊ ခေါက်သိမ်းနိုင်သော ကုတင် အလုံး ၁၀,၀၀၀ နှင့် ခြုံစောင် အထည် ၂၀,၀၀၀ ကိုလည်း ပေးပို့ထားပြီးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်တောင်ပိုင်း ယူနန်ပြည်နယ် Yangbi Yi ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရမြို့နယ်၌ မေ ၂၂ ရက်က ငလျင်လှုပ်ခတ်ပြီးနောက် ဒေသခံများအား ရဲအရာရှိများက ကယ်ဆယ်ရေးဆောင်ရွက်နေစဉ် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်တောင်ပိုင်း ယူနန်ပြည်နယ် Yangbi Yi ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရမြို့နယ်၌ မေ ၂၂ ရက်က ငလျင်လှုပ်ခတ်ပြီးနောက် နံရံအက်ကွဲသွားသော အိမ်တစ်လုံးအားတွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်တောင်ပိုင်း ယူနန်ပြည်နယ် Yangbi Yi ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရမြို့နယ်၌ မေ ၂၂ ရက်က ငလျင်လှုပ်ခတ်ပြီးနောက် အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးအထောက်အပံ့များ ရောက်ရှိလာစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ပြီးခဲ့သော သောကြာနေ့က ပေကျင်းစံတော်ချိန် ည ၉ နာရီမှ ၁၁ နာရီအတွင်း ယူနန်ပြည်နယ် တာ့လီပိုင်လူမျိုး ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသရှိ ယန်ပိယီ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရမြို့နယ်တွင် ပြင်းအား ၅.၀ အဆင့်ရှိ ငလျင် ၄ ကြိမ်လှုပ်ခတ်ခဲ့ကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံ မြေငလျင်ကွန်ရက်စင်တာ(CENC) ၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။ ပြည်နယ်အတွင်းရှိ မြို့နယ် နှင့် မြို့ စုစုပေါင်း ၁၂ ခုတွင် ငလျင်ဒဏ်ကို သိရှိခံစားခဲ့ရပြီး ယန်ပိမြို့နယ်သည် အဆိုးရွားဆုံးခံစားခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။
နောက်နာရီအနည်းငယ်အကြာ နောက်တစ်နေ့ (စနေနေ့)နံနက် ၂ နာရီ ၄ မိနစ်တွင် ချင်းဟိုင်ပြည်နယ် Golog တိဖက်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ Maduo မြို့နယ်တွင် ပြင်းအား ၇.၄ အဆင့်ရှိ အင်အားပြင်း ငလျင်တစ်ခု လှုပ်ခတ်ခဲ့ကြောင်း CENC ၏ ထုတ်ပြန်ချက် အရ သိရသည်။(Xinhua)
BEIJING, May 22 (Xinhua) — China has allocated 10 million yuan (about 1.56 million U.S. dollars) from its central budget for disaster relief to the provinces of Yunnan and Qinghai after they were rattled byaseries of earthquakes on Friday and Saturday.
Hours later, at 2:04 a.m. on Saturday,a7.4-magnitude earthquake jolted Maduo County in the Golog Tibetan Autonomous Prefecture of Qinghai Province, according to the CENC. Enditem
(1,2)May 22, 2021 (Xinhua) — Police officers rush to rescue in Yangbi Yi Autonomous County, southwest China’s Yunnan Province, May 21, 2021.
(3) Police officers help evacuate residents in Yangbi Yi Autonomous County in southwest China’s Yunnan Province, May 21, 2021.
(4) The wall ofahouse is seen cracked at the epicenter in Yangbi Yi Autonomous County in southwest China’s Yunnan Province, May 22, 2021. A 5.6-
(5) Rescuers carry relief supplies in Yangbi Yi Autonomous County, southwest China’s Yunnan Province, May 22, 2021.